2Sa 16 | Shona | STEP | Zvino Dhavhidhi wakati apfuura musoro wegomo zvishoma akaona Zibha, muranda waMefibhosheti osangana naye, ane mbongoro mbiri dzakanga dzatakudzwa zvingwa zvina mazana maviri, namasumbu amazambiringa akawomeswa ane zana, nemichero yezhezha ine zana, nehomo yewaini.
1Zvino Dhavhidhi wakati apfuura musoro wegomo zvishoma akaona Zibha, muranda waMefibhosheti osangana naye, ane mbongoro mbiri dzakanga dzatakudzwa zvingwa zvina mazana maviri, namasumbu amazambiringa akawomeswa ane zana, nemichero yezhezha ine zana, nehomo yewaini.
2Mambo akati kuna Zibha, "Unodiniko nezvizvi?" Zibha akati, "Mbongoro ndinopa veimba yamambo kuti vatasve; zvingwa nemichero yezhezha ndizvo zvokudya zvamajaya, newaini kuti vanoziya murenje vanwe."
3Mambo akati, "Mwanakomana washe wako uripiko?" Zibha akati kuna mambo, "Tarirai, wakasara Jerusaremu, nokuti wakati, `Nhasi imba yaIsiraeri vachandidzosera ushe hwababa vangu.' "
4Ipapo mambo akati kuna Zibha, "Tarira, zvose zvaMefibhosheti ndezvako." Zibha akati, "Ndinokotamira pasi; ndinzwirei nyasha, ishe wangu mambo."
5Zvino mambo Dhavhidhi wakati asvika paBhahurimu, mumwe munhu weimba yaSauro, wainzi Shimei, mwanakomana waGera, akabudapo; 6akabuda, akafamba achingotuka, akaposhera Dhavhidhi namabwe, navaranda vose vamambo Dhavhidhi; zvino vanhu vose navarume vose vesimba vakanga vari kurudyi rwake no kuruboshwe rwake. 7Shimei akatuka akati, "Chibva, chibva, iwe munhu weropa, iwe munhu wakaisvoipa; 8Jehovha wakadzosera pamusoro pako ropa rose reimba yaSauro, wawakanga wakabata ushe panzvimbo yake. Jehovha wakapa ushe muruoko rwaAbhusaromu mwanakomana wako; tarira, wabatwa nezvakaipa zvako, nokuti uri munhu weropa."
9Ipapo Abhishai mwanakomana waZeruya akati kuna mambo, "Imbwa iyi yakafa ingatuka seiko ishe wangu mambo? Nditenderei henyu ndiyambukire mhiri, ndimugure musoro."
10Mambo akati, "Ndine mhosva yeiko nemi, imi vana vaZeruya; ngaatuke hake, kana Jehovha achinge ati kwaari, `Tuka Dhavhidhi,' ndianiko ungati, `Waitireiko kudai?' " 11Dhavhidhi akati kuna Abhishai, nokuvaranda vake vose, "Tarirai, iye mwanakomana wangu wandakabereka, unotsvaka kundiuraya; ndoda zvino muBhenjamini uyu! Muregei, ngaatuke hake, nokuti Jehovha wakamuraira. 12Zvimwe Jehovha uchaona zvakaipa zvandakaitirwa, zvimwe Jehovha uchandiitira zvakanaka pamusoro pokundituka kwake nhasi." 13Naizvozvo Dhavhidhi navanhu vake vakaramba vachifamba havo nenzira, Shimei akaramba achifamba nomujinga megomo pakatarisana naDhavhidhi, akafamba achingotuka nokumuposhera namabwe, nokumupfumburira guruva. 14Mambo navanhu vose vakanga vanaye vakasvika vaneta, vakazororapo.
15Abhusaromu navanhu vose, ivo varume vaIsiraeri, vakasvika Jerusaremu, Ahitoferi anayewo. 16Zvino Hushai muAriki, shamwari yaDhavhidhi, wakati asvika kuna Abhusaromu, Hushai akati kuna Abhusaromu, "Mambo ngaararame, mambo ngaararame!" 17Abhusaromu akati kuna Hushai, "Ndizvo zvakanaka zvaunoitira shamwari yako? Wakaregereiko kuenda neshamwari yako?"
18Hushai akati kuna Abhusaromu, "Kwete, asi wakatsaurwa naJehovha uye vanhu ava, uye navarume vose vaIsiraeri, ndiye wandichava wake, ndiye wandichagara naye.
19"Uye ndingafanira kushumira aniko? Handifaniri kushumira mwanakomana wake here? Sezvandakashumira baba venyu, ndichakushumiraiwo imi saizvozvo."
20Ipapo Abhusaromu akati kuna Ahitoferi, "Tipei zano rako, tinofanira kuiteiko?"
21Ahitoferi akati kuna Abhusaromu, "Pindai kuvarongo vababa venyu vavakasiya, kuti vachengete imba; ipapo vaIsiraeri vose vachanzwa kuti mosemwa nababa venyu; ipapo maoko avose vamunavo achasimbiswa." 22Naizvozvo vakadzikira Abhusaromu tende pamusoro peimba, Abhusaromu akapinda kuvarongo vababa vake vaIsiraeri vose vachizviona.
23Zvino mano aAhitoferi aakapa mazuva iwayo, akanga akaita samashoko akabvunzwa kuna Mwari; ndizvo zvakanga zvakaita mano aAhitoferi aakapa Dhavhidhi naAbhusaromu vose.